प्रेमेजुङ इलाम जिल्लाको माइजोगमाई गाउँपालिका अन्तर्गतको एक गाउँ हो । यो गाउँले पालिकाको वडा नं. १ र ३ ओगटेको छ। २०३८ सम्म यो गाउँ गोर्खेधाप गाउँ पञ्चायतको २ नम्बर वडामा पर्दथ्यो। पछि यसलाई नयाबजार गाविसमा सारियो । निगाले र बगाले, चामेटार, काब्राबोटे, गुप्ती, सेतीखोला गाउँ, ढाँडे, रिटाम, जस्ता सानासाना गाउँहरू मिलेर प्रेमेजुङ्ग बनेको छ। शंखाबुङ, गुम्बा गाउँ, गुरुङ गाउँ, भण्डारी गाउँ, लप्सीबोटे, मकर्जुङ, ढोडे, आहाले, आरूबोटे, पान्दाम, ढुंगे, माङचोक, आदि यस गाउँका का छिमेकी गाउँहरू हुन् ।
सोयाङ, प्याङ, जोगमाई, सिरिसे, नाम्सालिङ आदि तर्फ जाने गाडी प्रेमेजुङ हुँदै चल्ने गर्दछन्। जोगमाइ खोलाको दायाँपट्टि अवस्थित यस गाउँमा सुँगुरे खोला, सेतीखोला, होर्मे खोला, घट्टे खोला तथा छरछरे, ढाँडे, चिन्ते लगायतका खोल्साहरू रहेका छन्। बेंसीमा सुँगुरे बेंसी, चिउरे, जिम्बुबोटे, होर्मे तथा साँघुबेंसी यस गाउँका मुख्य धानखेत हुने ठाउँहरू हुन्।
यहाँको हावापानी एकदमै अनुकुल छ। जाडोमा धेरै जाडो तथा गर्मीमा धेरै गर्मी नहुने समशीतोष्ण हावापानी यहाँको विशेषता हो। तर उचाइ तथा अवस्थितिका कारण गाउँको पुछारमा अवस्थित सुँगुरे बेंसी र सिरानमा अवस्थित गुप्ती एवं गुराँसे बीच हावापानीमा केही अन्तर भने पाइन्छ। यस गाउँमा मुख्यतया जेठ देखि भदौसम्म वर्षा हुने गर्दछ। अत्याधिक वर्षा हुने असार र साउन महिनामा छरछरे, ढाँडे जस्ता केही गाउँहरू बाढी पहिरोको त्रासमा पर्दछन्। तर विगत २० वर्षयता बाढी पहिरोले गाउँमा खासै नोक्सान पुर्‍याएको पाइँदैन।
खेती र पशुपालन यहाँका बासिन्दाको मुख्य पेसा हो। व्यापार, नोकरी र राजनीति तर्फ पनि विस्तारै यहाँका मानिसहरू आकर्षित हुँदै गैरहेका छन्। सुरू सुरूमा गाउँमा कुनै आर्थिक गतिविधि नदेखेका गाउँलेहरू पर्म तथा ज्यालामा काम गर्ने गर्दथे। तर ज्यालाको रकम पैसामा नभै बाली अथवा वस्तुको रूपमा भुक्तान गरिन्थ्यो। पछि वि.सं. १९९६ ताका गाउँको ग्राफाइट खानी खुलेपछि त्यसै खानीमा काम गर्ने ज्यामीहरूले सम्भवतः पहिलोपटक ज्याला स्वरूप पैसा प्राप्त गरेका थिए। इलाम सदरमुकाममा वि.सं. १०१२ चैत्र १२ गते पहिलो पटक मोटर जाँदा गोर्खे बजारबाट प्रेमेजुङ हुँदै माइबेनीको बाटो इलामसम्म गाडी पुगेको थियो तर प्रेमेजुङमा भनेका बेला गाडी पुग्ने बाटो चाँही त्यसको पचास वर्षपछि मात्र पुग्यो त्यो पनि जनताले आफ्नै पाखुराले खनेर। यातायातको सुविधा नभएतापनि मानिसले आफैं डोकोमा बोकेर अथवा घोडामा बोकाएर कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई भारतीय सीमावर्ती बजार मानेभञ्ज्याङ तथा नेपाली बजार गोर्खे बजारसम्म पुर्यानएर बिक्री वितरण गर्ने गरेका थिए। यहाँको मुख्य कृषि उत्पादनमा अदुवा, अलैंची, अम्लिसोको कुचो, मटरकोसा, अन्य तरकारी तथा फलफूलहरू आदिले भारतीय बजारमा निकै राम्रो ख्याती पाएका छन्।
ढुङ्ग्यानयुक्त भिरालो जमीन भएकाले यहाँको खेतीपाती परम्परागत भन्दा अलग किसिमको हुने गरेको छ। यहाँका मानिसहरू परम्परागत खेती भन्दा नयाँ किसिमको खेती गर्न रुचाउँछन्। उनीहरू मुख्यतया नगदेबाली लगाउँदछन्। परम्परागत खेतीको रूपमा धान, मकै, कोदो, फापर, गहूँ, आलु र केही सागसब्जी, उत्पादन हुने भएतापनि नगदेबाली तर्फको आकर्षणका कारण अहिले मटरकोसा, अदुवा र मुख्यतया चियाखेती तर्फ मानिसहरू आकर्षित हुँदै गएका छन्। चियाखेती सँगसँगै कफी पनि उत्पादन हुन सुरू भएको छ। यद्यपि उत्पादित कफीको दानाले बजार नपाएपछि यहाँका जनता हुर्केका कफीका बोट पनि उखेल्ने स्थितिमा पुगेका छन्। परम्परागत रूपमा गाइपालन गर्ने किसानहरूले वि.सं. २०४१मा दुग्ध विकास संस्थानले सङ्कलन केन्द्र खोलेपछि भने व्यापारिक रूपमैं दुध उत्पादनमा लागेका हुन्। यो सङ्कलन केन्द्रको स्थापनाले प्रेमेजुङको आर्थिक गतिविधिमा युगान्तकारी भूमिका खेलेको थियो। त्यसबेलादेखि नै कृषि विकास ब्याङ्कले गाइपालनमा ऋणको व्यवस्था गर्ने, कृषकहरूले पनि भारतको पोख्रेबुङ लगायतका ठाउँबाट जर्सी, होलेस्टेन आदि जातका दुधालु गाई ल्याएर पाल्ने क्रमको विकास भयो। गाइपालन सँगसँगै त्यसलाई आवश्यक पर्ने घाँस उत्पादनमा पनि मानिसहरूको ध्यान आकर्षित हुन थालेको पाइन्छ। यसका लागि बारीमा धूस, अम्लिसो जस्ता घाँसहरू लगाउने प्रचलन पनि तीब्र रूपमा बढेको देखिन्छ। अम्लिसोबाट घाँस मात्र नभै कुचो समेत उत्पादन हुने भएकाले यसबाट कृषकहरूले दोहोरो फाइदा लिन पाएका छन्। गोर्खे बजारको चहल पहल हुँदा प्रेमेजुङको मुख्य बजार गोर्खे बजार नै थियो। मानेभञ्ज्याङ् मार्फत दार्जिलिङ सँग सीधा सम्पर्क गराउने गोर्खे बजार एक ताका इलाम मात्र नभै धनकुटा, भोजपुर, तेह्रथुम, पाँचथर आदि क्षेत्रकै प्रमुख नाकाको रूपमा रहेको थियो। झापाबाट फिक्कल हुँदै इलाम जाने मेची राजमार्गको सञ्चालन पश्चात् फिक्कलबजार प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रूपमा उदायो जसले गर्दा गोर्खे बजार सुक्न थाल्यो। हाल फिक्कल बजार प्रेमेजुङ्कोा नजीकैको बजारको रूपमा रहेको छ। अन्य बजारमा नयाँबजार तथा भारतका मानेभञ्ज्याङ, सुखियापोखरी, दार्जिलिङ सम्मका बजारमा यहाँका मानिसहरू हाट भर्न जाने र आफ्ना उत्पादन हरू बिक्री गर्न पुग्छन्। गाउँमा बुधबार हाट लाग्ने गर्दछ त्यसका अतिरिक्त तरकारी तथा दुग्ध एवं कृषिजन्य उत्पादनहरू खरीद गर्न घरघरमा नेपाली तथा भारतीय व्यापारीहरू पुग्ने गर्छन्।
प्रेमेजुङ गाउँ फिक्कल बजारबाट १३ किलोमीटर पश्चिम उत्तरमा अवस्थित छ। यो ठाउँ पुग्नका लागि मोटरबाट फिक्कल बजारबाट बरबोटे, ढोडे, मयू खोला, मकर्जुङ, साँघुबेंसी, डाँडाखेत हुँदै जान सकिन्छ।
आसपासका गाविसहरूबाट प्रेमेजुङ जान पैदल यात्रा एकमात्र उपाय हो। यद्यपि मौका परेमा फिक्कल, नाम्सालिङ र नयाँबजारबाट मोटर चढेर पनि यहाँ पुग्न सकिन्छ। जिल्ला सदरमुकाम इलाम बजारबाट ४ घण्टा नाम्सालिङको शुक्रबारे बजार बाट, सोयाङ बाट, गाविस सदरमुकाम नयाँबजारबाट, फिक्कल बजारबाट र पञ्चकन्याबाट २ घण्टाको पैदल यात्रामा प्रेमेजुङ पुग्न सकिन्छ। त्यसैगरी प्याङबाट ३ घण्टा गोर्खेबाट १ घण्टा जोगमाईबाट यहाँ आइपुग्न डेढ घण्टाको समय लाग्छ।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=प्रेमेजुङ&oldid=1022482" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १८:१३, २६ जुन २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।